Bacarimin - Wikipedia
Habka bacariminta ee dhirta.
Bacarimin (ingiriis: Plant Reproduction) waa habka tafiiranka dhirta ayadoo firi-tafiir ka timid ubaxa lab la gaadhsiinayo ubaxa dhedig.
Inkastoo qaabka iyo dhismaha dhirtu kala duwan tahay, gebi ahaan geeduhu waxay u tarmaan qaab isku mid ah.
In badan oo dhirta ka mid ah dabeeysha ayaa ka qeyb qaadata habka bacariminta, halka qaar kale soo jiitaan xasharaadka yaryar ka dibna lugaha ku qaadaan geed ilaa geed kale.
Geedo badan waxay leeyihiin ubax lab iyo dhedig ah oo ku kala yaala laamaha kala duwan ee geed isku mid ah, isla markaana ayaga ayaa isbacarimiya. Halka geedaha qaar leeyihiin ubax lab ah ama mid dhedig ah isla markaana isdhaafsadaan.
Ubaxa lab wuxuu ku yaalaa laamaha sare ee geedaha, halka kan dhedig ku sameeysan yahay laamo hooseeya. Taasi waxay suurto gelisaa in firida-tafiirtu (pollen) si fudud u gaadho ubaxa dhedig ayagoo hawada dhex maraya.
Sida caadiga ah, ubaxa dhirtu waxay sameeyaan tiro badan oo firida-tafiirta ah (pollen), sababtoo ah lama hubo midka ku hagaagaya ubaxa dhedig. Dhirta dabayshu bacarimiso ma lahan ubax qurux badan iyo macmacaanka soo jiita xasharaadka. Si ka duwan taas, ayaa dhirta cayayaanku u kala qaado firida-tafiirta (pollen) waxay leeyihiin ubax waawayn oo midab qurux badan leh, isla markaasna badhtanka ayay ku leeyihiin dareere macaan; kuwaas oo soo jiita xasharaadka. Firida-tafiirtu waa mid qoyaan leh oo ku dhegta lugaha xasharaadka iyo meel kasta ooy gaadhaan. Sidoo kale, qaar kale waxay leeyihiin baadad u suurto gelisa ineey hawada dhex sabeeyaan, taas oo qaarkood safraan masaafo dhan ilaa 800km.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacarimin&oldid=156713"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 May 2016, marka ee eheed 18:10.